Ezempilo, Yeka Ukubhema
Emakethe yaseRussia U-Esse ugwayi wavela ngo-2003 futhi ngokushesha wathola ukuthandwa okukhulu. Lezi zinsipho ezincane ngokunambitheka okunomusa zijabulela ikakhulukazi isigamu esihle senani lezwe.
Izinto nezesekeli zokubhema ziqale zibhekiswe kumadoda. Kungenxa yabo ukuthi abakhiqizi emhlabeni wonke baqhubeka bethuthukisa izinhlobo ezintsha zikagwayi, amapayipi kanye nogwayi. Enye yezinkampani zaseKorea zaseNingizimu Afrika yanquma ukulungisa lesi simo futhi yazisa ama-Esse ugwayi emakethe. Ukubukeka kwabo kwakuhambisane nezikhangiso eziningi ezokuxhumana. Izisholo ezinjengokuthi "Indawo okunethezekayo", "Konke kusemandleni akho" no-"Esse. Yakha isithombe sakho "sasisezindebe zomuntu wonke. Umkhiqizo wathengiswa masinyane, futhi ngokwempela eminyakeni emibili, ukuthengiswa kwawo kwaphindwe kabili. Abamele ubulili obuhle U-Esse ugwayi ugxila ikakhulukazi emaphaketheni angavamile.
Isivuno esincane, esandiswe kancane ngobude, sasibonakala singenasisindo ezandleni. Ochwepheshe kakhulu bacabanga kahle ngokuklama kwayo. Ekuqaleni lo mdwebo wawuwumugqa ocacile wembala ehlukene kuye ngokuthi uhlobo lomkhiqizo. Ngemva kwesikhashana, i-geometry yesithombe ishintshiwe. Le nqwaba yayinjengokungathi igcwele umusi omibala, okuvela kuyo izincwadi zegama.
I-cigarettes i-Esse ngisho ihlukile ngaphandle kwezinye. Ziyabonakala isikhathi eside futhi zibukeka zingcono kunesandla senkosikazi enhle. Futhi umdwebo nemibhalo ebhalwe esihlungi kunika umphumela okhethekile. Ukuqinisekisa ukuthi lezi cigaretti zenzelwe abesifazane ngokuqondile, yizona ezinconywa kakhulu izinkomba ezilawulwayo. Kuzo, okuqukethwe kwe-nicotine kubanga kusuka ku-2.5 kuya ku-6.5 milligram, futhi i-nicotine ingu-0.25 kuya ku-0.65 milligram. Umuntu onjalo ugwayi, kunzima ukukhanda ngamatshe. Ukuze wenze lokhu, ungadinga lonke iqembu. Kodwa intombazane iyoba nekhono ngokwanele ukuzwa ukukhanya okumnandi nokuzwa iphunga elimnandi. Yebo, futhi intengo yalezi sigwayi nayo ijabula kakhulu. Ekuqaleni, iphakethe elilodwa, kwakudingeka ukhokhe kuphela ama-ruble angu-32 kuphela. Lokhu kuyabizi kakhulu uma kuqhathaniswa namanani wemikhiqizo yamanye imikhiqizo. Yiqiniso, manje ukubaluleka kwezimpahla kuye kwanda kancane. Kodwa kuncike kakhulu kumanani we-dollar kunomkhiqizi uqobo.
Cishe wonke owesifazane ophuza okungenani uma esama u-Esse ugwayi. Iningi labo lihle. Bonke baqaphela ukunambitheka okumnandi komkhiqizo ngaphandle kokuzwa okungcolile okungaphandle kokumvelo kwamakhemikhali. Ugwayi onjalo ulula kalula futhi unike ifu elincane elimnandi lomusi ovuthayo. Lokhu kuphinde kugcizelele izinga elihle legwayi elisetshenzisiwe. Abathengi baphawula izinga layo elihle, amandla alinganiselayo nokugxila okujwayelekile. Yini enye ongayifuna kusuka kugwayi? Ngaphezu kwalokho, maduzane kunezinhlobo eziningi nezinhlobo eziningi zalolu hlobo, ukuthi wonke owesifazane uzokwazi ukuthola indlela efanelekayo. Isibonelo, abaningi bajwayele ukukhetha izibonelo ezinjenge-Esse Light Blue.
Lapha isithombe esifanayo. Umkhiqizo ujabulisa ngenjabulo, awumisani cishe emqaleni futhi awubabazi. Ngokwemvelo, kukhona umklamo othakazelisayo nge hologram ezimangalisayo kanye foil embossed ngaphakathi pack ngamunye. Yiqiniso, abanye bathi u-Esse ugwayi usanda kulahlekelwa phansi. Ukubuyekeza mayelana nekhwalithi yegwayi kuqala ukudala ukungabaza futhi kukhona izikhalazo mayelana nephunga elingafaneleki. Noma kunjalo, imibono enjalo ayifani kakhulu.
Kubonakala sengathi, maduze nje emashalofini ethu kwavela ugwayi u-Esse. Izinhlobo zale mkhiqizo aziziningi ekuqaleni.
Izinketho ezine kuphela: ezijwayelekile, ukukhanya, amasimu kanye ne-mentol. Kulezi zindawo, u-Esse epaketheni elibomvu kwakubhekwa njengenamandla kakhulu futhi aqukethe ama-millimitha angu-6.5 we-resin kanye no-0.65 milligrams we-nicotine emgwaqeni ngamunye. Empeleni, isilinganiso esihle. Yonke imikhiqizo yakhiqizwa ngesimo sama-superslims. Ngokuhamba kwesikhathi, kwakukhona ama-esse kagesi omusha omusha, atholakale ezithameli eziningi ngokuthi:
1) i-Golden Leaf.
Zombili ziyizinhlobo zokukhanya. Yiqiniso, ngokuhlukile kokubili, okuqukethwe kwe-nicotine ne-tar kunamaphesenti angu-1.5 ngaphezulu. Kodwa le ndaba ayizange iphele lapho. Kuthengiswa kwakukhona ugwayi onama flavour ahlukene. Izinzwa ezihlukile zibangelwa i-Esse edume emhlabeni wonke (i-aura strawberry, i-apula). Ukunambitheka okumangalisayo okuxutshwe kanye nephunga elimnandi lala kagwayi isikhathi eside lihlala enkumbulo. Kamuva kwavela izinhlobo ezinjalo ezithakazelisayo njengeSoo and Ice. Bathola nomthengi wabo. I-Esse Slims Special Editor, eyethulwa yizinhlobo zeSiliva neGold, zithande isithakazelo esikhethekile nesidingo esikhulu.
Uma ufunda lezi zinto noma ezinye imikhiqizo ezithakazelisayo ikakhulukazi umkhiqizi wazo. U-Esse ugwayi emkhakheni waseRussia wenziwa esifundeni saseKaluga. Lapha inhlangano edume yaseNingizimu Korea yaseKorea Korea Tomorrow & Global Corporation (KT & G) yakha ifoni enamandla, ebiza cishe ama-dollar ayizinkulungwane eziyikhulu. Imishini yanamuhla ubuchwepheshe obusha buvumela ukukhiqiza imikhiqizo emikhulu yekhwalithi ephezulu kakhulu. Ngaphezu kwalokho, kunamagatsha ayisishiyagalombili asezweni lethu eliseKrasnodar, eYekaterinburg, eSt. Petersburg, e-Ufa, e-Omsk, eSaratov, eNizhny Novgorod naseRostov-on-Don. Bangabathumeli abancane bekampani yaseKorea. Esikhathini esizayo esiseduze, i-giant empumalanga izovula izikhungo ezifanayo eTatarstan, eSiberia naseNyakatho Caucasus. Ngaphezu kokukhulisa umkhakha wethonya, amaKorea aqhubeka nokusebenza ekwakheni izinhlobo ezintsha. Bakhathele ukulinganiselwa kuphela ngabalaleli besifazane. Izinhlobonhlobo ezifana neLeaf Golden ne-Black, zingahambisana namadoda.
Umklamo oqinile wephakheji ngokuhlanganiswa kwemibala emhlophe nomnyama, kanye nokufakwa okuncane kwesiliva kakade kuvunyelwe ngabathengi.
Paperama: ukudlula amazinga, nezici zabo